VaTsvangirai Vanoenderera Mberi neMisangano muBritain
Chikumi 23, 2009
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, neChipiri vaenderera mberi nemisangano yavo muBritain kunyange hazvo vamwe muZanu-PF vari kuchichema chema vachiti misangano iyi iregwe sezvo gurukota reZanu-PF riri muhurumende rakanyimwa vhiza rekuenda kurwendo urwu.
Gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, vakanyimwa vhiza rekuenda kuBritain kuti vanopinde kumusangano wekukurudzira zvemighodhi muAfrica uri kuitirwa muLondon. VaMpofu mumwe wevanhu vakaiswa pazvirango zvekufamba neBritain.
Asi mamwe makurukota emuZANU-PF, akaita saVaWalter Mzembi, ari muLondon parwendo ravari kufamba naVaTsvangirai.
VaMpofu vakatsamwisa vanorwira kodzero dzevanhu mwedzi yapfuura mushure mekutaura kuti kwaMarange hakusi kuurayiwa vanhu nemauto kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu achiti vanhu vakawanda vari kurasikirwa nehupenyu hwavo munzvimbo iyi.
Vachitaura pane mumwe musangano nevemabhizinesi neChipiri muLondon, VaTsvangirai vakakurudzira vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika.
Mutauriri waVaTsvangirai, VaJames Maridadi, vanoti mutungamiri wehurumende havanei nekupiwa mavhiza kwevanhu nekudaro havana chavangaite.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, VaGlen Mpani, vanoti Zanu-PF inofanira kusiya katsika kayo isati yachema nezvekubviswa kwezvirango.
Hurukuro naVaGlen Mpani